မျှော်လင့်နေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မျှော်လင့်နေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ – ၁	12
Posted by အောင် မိုးသူ on Aug 20, 2015 in Creative Writing, Movies/TV | 12 comments
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ရုပ်ရှင်အက်ဆေးလိုမျိုးတွေ အေးဆေးစွာ
ရေးချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။ အခြေအနေအရလည်း မပေးသေးတော့ အလုပ်လုပ်ရင်း လက်တန်းရေးဖြစ်
ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရုပ်ရှင်ခရေဇီဆိုတော့ လောလောလတ်လတ်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့
ဇာတ်ကားလေးတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း စောင့်ကြည့်မယ် ဇာတ်ကားလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါရဲ့။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Animation ဇာတ်ကားတွေကို မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အခုတင်ပြပေးမယ် ဇာတ်ကားတွေ
ကတော့ ကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးဖူးသားဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်းအဟောင်းတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းအဆက်တွေပါ။
2016, May 27 မှာ ထွက်ရှိလာမယ့်ကားပါ။ Animation ချည်းပဲ မဟုတ်ပေမယ့် ရောစပ်ထားတဲ့ကားမို့
ညွှန်းပါရစေ။ သည်ဇာတ်ကားရဲ့ ပထမကားကတော့ Alice in Wonder Land ပါ 2010 ခုနှစ်မှာ
ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ခြောက်နှစ်အကြာမှာ ဒုတိယမြောက်ကား ထွက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ
ဇာတ်ကားတစ်ကား ထွက်ဖို့ ဒီလောက်အချိန်ကြာသလားဆိုတော့ ကွာလတီကလည်း ကောင်းလို့ပေါ့နော်။
ပထမကားမှာတော့ အဲလစ်စ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ကမ္ဘာက ဒဏ္ဏာရီထဲက
သူရဲကောင်းမင်းသမီးလေးတစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါ။ IMDB 6.5 rating သာ ရရှိထားပါတယ်။
Disney က ထွက်တဲ့ကားတွေဟာ ပုံပြင်ဆန်ဆန်တွေဆိုတာ သတိထားမိပေမယ့်။
သဘောကျမိတဲ့ကားထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဒုတိယမြောက်ကားကိုတော့ ပထမကားထက်ပိုမိုမျှော်လင့်မိတာတော့
2003 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Finding Nemo ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ
ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပါတယ်။ နီမိုဆိုတဲ့ကားလေး ဖမ်းခေါ်သွားခြင်းခံရတာကစလို့ နီမိုကိုလိုက်ရှာတဲ့
Animation ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ IMDB 8.3 Raiting ရရှိထားပါတယ်။
အဲသည်ရုပ်ရှင်ကား ဖန်တီးဖို့အတွက် ရေအောက်က ရေသတ္တဝါတွေရဲ့ နေထိုင်ပုံအပြုအမူတွေကအစ
မှတ်တမ်းတင်လေ့လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုခဲ့ ပါတယ်။ အခု Finding Dory မှာတော့ ပထမကားရဲ့ နီမိုဆိုတဲ့
ငါးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ ဒိုရီဆိုတဲ့ အပြာရောင်ငါးလေး ရဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမကားရဲ့ ရသကို
မီနိုင်မလားလို့ မျှော်လင့်ရင်း စောင့်နေမိတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါပဲ။
မျှော်လင့်နေသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ – ၁ ကို ဒီမှာအဆုံးသတ်ပြီး (၂)မှာ ဘယ်လို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ
ကို မျှော်လင့်ဦးမလဲဆိုတာ တွေးရင်း။
kai says: ကျုပ်ကတော့.. Avatar2 ကိုမျှော်မိတယ်..။
Avatar 2′ Movie Sequel Release Date Unveiled : Entertainment : Latin Post
LatinPost‎ –2days ago
Reports indicate that “Avatar 2” is slated foraDecember 2017 release date. Back in June it …
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်တော့ Avatar ကို သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ… ။
ဂျိမ်း ဖန်တီးပြတာတွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး…ဖျားနေတာ…
ဆယ်ခါပြန် ဆယ်ခါ ကြည့်ပစ်လိုက်အုန်းမယ်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲလစ် တော့ ဘယ်လိုမှ ကို မကြိုက်နိုင်ဘူးကွယ်။
ဆိုတော့ ငါး ကလေး ကိုပဲ စောင့်တော့မယ်
ဟေသီ says: ကျွန်မလဲ အဲလစ်သိပ်မကြိုက်ဘူး နီမိုကို ပိုကြိုက်လို့ ဒိုရီကို မျှော်လင့်မိတယ်…
naywoon ni says: မြန်​မာဂါး​ဒွေကို​ဂေါ မ​မျှော်​လင့်​ဘူးလား ။ ကိုယ့်​နိုင်​ငံထဲက သူများဆီက ကြိုးစားပမ်းစား ခိုးချထားတာ​လေး​တွေလည်းညီမျှမျှ အား​ပေးဦးမှ​ပေါ့
Mike says: . Finding Nemo ကတော့တော်တော်အောင်မြင်ခဲ့တယ်…နောက်ကားလည်းကောင်းမှာပါ
@QUIL@ says: အန်နီမေးရှင်းတွေ နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ပြောစရာ ရှိတာ ၂ခုဗျ.. အဲ့ဒါ အရုပ်နဲ့အသံ
(အရုပ် နဲ့ အသံ ဆိုမှ တော့ ဘာကျန်ဦးမှာလဲဗျာ)
သူတို့ က အသံ သရုပ်ဆောင်တွေကို အရမ်း အလေးထားကြတယ်
(နာမည်ကျော်တွေ ၀င်သရုပ်ဆောင်ကြတာလည်း မနည်းဘူး)
ဒါကြောင့် အရမ်းလည်း ပီပြင်ကြတယ်..
ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ရုပ်ကိုလိုက်လို့ (ပိန်-၀ နှုတ်ခမ်း အထူအပါး ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား) စသည်နဲ့
ကိုက်ညီအောင် အသံသရုပ်ဆောင်တွေ ရွေးချယ်သုံးလေ့ရှိတာတွေ့ရသဗျ။
စကိုင်းနက်က ဆြာ ဆြာမလေးများ အခုတလော လူရုပ်ရှင် တချို့ကို မြန်မာသံသွင်းပြီး ပြကြတယ်
အသံက အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ မမှန် တုန်းကမှား.. ။ အဘိုးကြီးရုပ်လည်း လူငယ်သံ အဘွားကြီးရုပ်လည်း
ချာတိတ်မအသံ …. ။ ပိုဆိုးတာက ဗင်မ်ဒီဇယ်လ် လို deep voice ရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်မျိုးအတွက် နောက်ခံအသံက
ညှောင်နာနာ… သေရောဗျာ…။ (လူနည်းသေးလို့ အစမို့လို့ ရှိမှာပါ….. ဖြေတွေးရတာပေါ့)
နောက်ပြီး ဇာတ်ဝင်တေးတွေ (အန်နီမေးရှင်းတွေက ကုလားကားတွေလို သီချင်းဆိုပြီး ကကြလေ့ရှိတယ်မဟုတ်လား)
ဇာတ်ဝင်ခန်းအတွက် သီးခြားရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ တကယ်ကို ဇာတ်ရဲ့ ပုံရိပ်ကြွလာအောင် လုပ်လေ့ရှိတာတွေ့ရတယ်
ပီယာနို ဖရိမ်နဲ့ တွေ့ရများပြီး စကားပြောသံ တခွန်း-နှစ်ခွန်းနဲ့ အတော်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေးတွေဗျ…
စကားပြောခန်း သီချင်းဆိုခန်း တွေမှာ ပါးစပ်ပေါက်ကိုက်အောင် အတော် အလေးထားပြီး လုပ်လေ့ရှိတာမြင်ရတယ်
သီချင်းဆိုခန်းများဆိုရင် သံရှည်ဆွဲတဲ့နေရာမယ်… မေးရိုက်မေးဝဲကအစ .. အောက်နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တုန်သွားတာကအစ ပီပြင်ရဲ့
သူတို့ဆီမှာ စကားလုံး တခုချင်းစီအလိုက် လူ့ပါးစပ်ဘယ်လိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အဘိဓါန်ကျမ်း ဆန်ဆန် ပြုစုပြီး အပီအပြင်
လိုက်လုပ်ထားသလိုပဲ ..ကျုပ်တို့ဆီက ကာတွန်းရုပ်ရှင်တချို့ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း စကားပြောခန်းဆို ပါးစပ်လှုပ်ရင်ပြီးရော … ဆိုတာမျိုးပေါ့
နောက်ပြီး (ဒါကတော့ ဓါတ်ပုံနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ပါ) ဆြာ့ဆြာကြီးများက composition ကောင်းချင်ရင် ရုပ်ရှင်များများကြည့်လို့
မှာလေ့ရှိသဗျ..။ အကွက်တကွက်ချင်းစီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လို compose လုပ်မယ်ဆိုတာ ပညာရလို့ပါတဲ့…။
အထူးသဖြင့် animation(ကာတွန်းရုပ်ရှင်) ကိုပိုပြီး ညွှန်းလေ့ရှိကြတယ်
ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ လူနဲ့ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ composition ရအောင် ပစ္စည်းပစ္စယ စုံရင်စုံသလို ဘာ camera, ဘာ lens
တခြား အထောက်ကူပြု တွေ trolley, drone စသည် သုံးပြီး ရိုက်လို့ရပေမယ့် ကာတွန်းကျတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ composition ရအောင်
ကိုယ်တိုင်ဆွဲရတာမဟုတ်လား..။ ပြောင်းပြန်အားဖြင့် လူရုပ်ရှင် မှာ မတတ်နိုင်မယ့် composition မျိုးကို ကာတွန်းမှာ လုပ်ယူလို့ရတဲ့
တကယ်တော့ အန်နီမေးရှင်းတွေက တကယ့် ပညာသိုက်တွေပါဗျာ..။
kai says: ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်..အန်နီမေးရှင်းကားတွေမှာ.. စူပါစတားမင်းသား/မင်းသမီးတွေ.. အသံနဲ့သရုပ်ဆောင်ရင်လည်း.. သူ့သရုပ်ဆောင်ခကို.. လူရုပ်ပါသရုပ်ဆောင်တာနဲ့ ကြေးအတူတူပေးရတယ်လို့မှတ်ဖူးတယ်..
ဒါပေမယ့်.. အန်နီမေးရှင်းရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရသလောက်.. သူတို့က.. လူသာပုံမပါတာ.. အသံကကွက်တိ ထွက်ပေး.. သရုပ်ဆောင်မှာပေါ်လွင်နေအောင်လုပ်ပေးနေရသမို့.. သူတို့အတွက်တော့ ..သက်သာပုံတော့မရ..။
@QUIL@ says: တချို့ ဘတ်ဂျက် ဖလင်တွေကျတော့ အသံတု ၀ိဇ္ဇာတွေကို သုံးသဗျ
သူတို့ကျ ဆယ်လီတွေလောက် ဈေးမရှိတဲ့အပြင် တယောက်ထဲနဲ့ အသံ ၄-၅မျိုး အနည်းလေး
ထွက်နိုင်ကြတယ်လေ…။တချို့များဆို ခွေးသံ ကြောင်သံတွေကအစ လေတိုးသံ တခုခုကျကွဲသံနဲ့ တချို့များ တူရိယာအသံတွေပါ လုပ်တတ်ကြတယ်
beat-box လိုမျိုး ဆိုပါတော့..။
မြန်ကျန့်ကားတွေမတော့ဗျာ… လက်သီးထိုးခန်း ဆို ဒချိ ဒချိ သံကမတက်ဘူး…
ဘာလို့လဲ ဆို ဟောလိဝုဒ် တချို့ ကားတွေတောင် ယနေ့ထက်ထိ ဓားအိမ်ထဲက ဓားကို ဆွဲထုတ်ရင် ချလွင် … မြည်ကြသေးတာပဲဟာ
တကယ်က ဓားအိမ်(သစ်သား) ကနေ ဓား(သံ သတ္တု) ကို ဆွဲထုတ်တာ ဘာမှ ချလွင် စရာအကြောင်းမရှိ…။
@QUIL@ says: ဆယ်လီတွေ က အသံသရုပ်ဆောင်တာ ရုပ်ရှင်ရိုက်သလောက်တော့ မပေးရတာ သေချာတယ်ဗျ
ရွှေရင်ရှုပ်က အရုပ်+အသံ အပါအ၀င် အခြား (ရိုက်ကွင်းရှိတဲ့နေရာ သွားရတာ …ဆံပင်ပုံစံ ကိုယ်အလေးချိန်) စသည် အကျအန လုပ်ပေးပြီး
လနဲ့ချီ (နှစ်ပေါက်အောင်) စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ရတာကိုး
အသံသရုပ်ဆောင်တာက နာရီ အနည်းငယ်အတွင်းပြီး သဗျ… ပြီးတော့ အသံဖမ်း စတူရီယို ပိစိပေါက်စ ရှိရင်
script ကိုင်ပြီး (ဒါမှမဟုတ်လည်း အကြမ်းကိုကြည့်ပြီး) ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း နားတဲ့အချိန် (အားတဲ့အချိန်) ဖမ်းလို့ သွင်းလို့ရတာကိုး
ဆယ်လီတွေ အပိုဝင်ငွေရှာတဲ့ နည်းဆိုပါတော့ဗျာ..။
Celebs can lay down audio tracks anywhere they are in the world, provided there’sarecording studio. It’s not unheard of forastar shootingafilm overseas to spendacouple of hours doingavoice-over and then return to the set to get on with the next scene.
အောင် မိုးသူ says: သူတို့ဆီမှာ အသံသရုပ်ဆောင်ကြတာကအစ အရမ်းကောင်းတယ်နော်။ ဒီမှာလည်း အစမို့ထင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကောင်းလာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါရဲ့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟယ်.. တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ… အခု Paulo Coelho စာကို ဘာသာပြန်မလို့ လုပ်နေတာ.. believing in impossible တဲ့.. အဲ့ထဲမှာ Alice Through The Looking Glass ထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးအကြောင်း ရေးထားတယ်… ကြည့်ချင်ထှာ..